Jamie Chung – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Hangover Part III (2013) Unicode The Hangover Part III (2013) သည် IMDb 5.9 Google User 87% ဒါရိုက်တာ Todd Phillips က ရိုက်ကူးထား၍ Todd Phillips, Craig Mazin တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Crime ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ကို ဒေါသအရမ်းကြီးသော ဂန်းစတားတစ်ဦးက ပြန်ပေးဆွဲသွားသောအခါ Wolf Pack သည် ထောင်ကလွတ်လာသော ဝရမ်းပြေး Mr. Chow နောက်ကို ခြေရာခံလိုက်ရလေသောအခါ ဘယ်လို ဟာသဇာတ်ကွက်တွေ ကြည့်ရဦးမလဲ ဇာတ်လမ်းမှာ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုကြည့်ကြပါခင်ဗျာ… Credit Review Zawgyi The Hangover Part III (2013) ...
IMDB: 5.8/10 290871 votes
The Hangover Part II (2011) Unicode The Hangover Part II (2011) သည် IMDb 6.5 Google User 87% ဒါရိုက်တာ Todd Phillips က ရိုက်ကူးထား၍ : Craig Mazin, Scot Armstrong တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Mystery ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Two years after the bachelor party in Las Vegas မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ လူပျိုည ပြီးတဲ့နောက် နှစ်နှစ်အကြာမှာ, Phil, Stu, Alan, နဲ့ Doug တို့ဟာ Thailand မှ လုပ်မယ့် ...
IMDB: 6.5/10 460349 votes
The Man with the Iron Fists (2012) Unicode လူစွမ်းကောင်းတွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ တရုတ်/ ဗြိတိသျှဇာတ်ကားပါ။ ဒီကားမှာ Russell Crowe က လွဲလို့ ကျန်တဲ့ မင်းသား၊ မင်းသမီး အတော်များများက တခြားဇာတ်ကားတွေမှာ Second Line-Up အဖြစ် အသုံးတော်ခံခဲ့ကြသူတွေပါ။ သိုင်းဝတ္ထုဖတ်နေရသလို ခံစားရမယ့် ဒီဇာတ်ကားကို မိသားစုနဲ့တော့ အတူမကြည့်သင့်ပါကြောင်း သတိပေးပါရစေ....။ Credit Review Zawgyi လူစြမ္းေကာင္းေတြနဲ႔ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ တ႐ုတ္/ ၿဗိတိသွ်ဇာတ္ကားပါ။ ဒီကားမွာ Russell Crowe က လြဲလို႔ က်န္တဲ့ မင္းသား၊ မင္းသမီး အေတာ္မ်ားမ်ားက တျခားဇာတ္ကားေတြမွာ Second Line-Up အျဖစ္ အသုံးေတာ္ခံခဲ့ၾကသူေတြပါ။ သိုင္းဝတၳဳဖတ္ေနရသလို ခံစားရမယ့္ ဒီဇာတ္ကားကို မိသားစုနဲ႔ေတာ့ အတူမၾကည့္သင့္ပါေၾကာင္း သတိေပးပါရေစ....။ Credit Review
IMDB: 5.4/10 59640 votes
Grown Ups (2010) Unicode Grown Ups ဆိုတဲ့ကားလေးက ၂၀၁၀ ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် comedy ရုပ်ရှင်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအညွှန်းအနေနဲ့ကတော့ အလယ်တန်းတုန်းက အတူဘတ်စကတ်ဘောကစားခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း ၅ ယောက် သူတို့ရဲ့ နည်းပြဖြစ်သူ ဆုံးသွားကြောင်းကို ကြားသိပြီးနောက် ပြန်လည်ဆုံစည်းဖြစ်ခဲ့ကြပုံလေးပါ။ သူငယ်ချင်း ၅ ယောက်ဆိုပေမယ့် မတူကွဲပြားတဲ့ စရိုက်ကိုယ်စီ ရှိကြသူတွေဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာလည်း ကိုယ်ပိုင် မတူညီတဲ့ ဘဝအသီးသီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလိုစရိုက်မတူသူ ၅ ဦးကပဲ ငယ်စဉ်က ကျောင်းဘတ်စကတ်ဘော ပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံဆုကို ရရှိခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘတ်စကတ်ဘောလို အားကစားတစ်ခုကစားရာမှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ကောင်းနေရုံနဲ့ နိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တစ်သင်းလုံး တက်ညီလက်ညီ စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ အပေးအယူမျှမျှ ကစားရတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလို စရိုက်ချင်းမတူညီကြတဲ့ သူငယ်ချင်း ၅ ယောက်ကရော ဘယ်လိုကြောင့် ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ကြတာလဲ? သူတို့ ၅ ယောက်ရဲ့ တူညီတဲ့ အချက်ကရော ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ? နှစ်တွေအကြာကြီး ကွဲကွာနေတဲ့ ...
IMDB: 5.9/10 213,798 votes